एक गोर्खा आर्मी, जसको आवाजले ब्रिटेनमा हलचल मच्चायो, अनि मेटियो नेपालीमाथिको विभेद
काठमाडौं, २७ वैशाख – आफैमा चुनौतिपूर्ण काम हो, विद्रोह। उत्तिकै जोखिमयुक्त पनि। जहाँ विभेद हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। विद्रोहको मुख्य कारण नै विभेद हो। संस्था, समाज वा देश, विभेदकै कारण विद्रोह भएको थुप्रै उदाहरण छन्। विभेद विरुद्ध हुने अधिकांश विद्रोह सफल पनि भएका छन्।
सैन्य संगठनमा पनि विद्रोह! त्यो पनि बेलायती सेनामा!
हो, बेलायती सेनामा गरिएको विभेदविरुद्ध विद्रोह गर्ने एउटा हिम्मतिला गोर्खाली सिपाही हुन् प्रेम गाहा मगर। खासमा त्यो विद्रोह नभएर समानताका लागि लडिएको ‘कानुनी लडाइँ’ थियो।
जिजुबाजे पूर्णवीरले तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट पहिलो विश्वयुद्ध लडे। हजुरबुवा तुलबहादुरले पनि इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट नै ब्रिटिश सेनामार्फत दोश्रो विश्वयुद्ध लडे। बुवा लेखहादुर नेपाली सेनामा भर्ती भए।
सोही कार्यकालमा लण्डनमा २९ वर्षीय युवा लेख बहादुर राना मगरको निधन भयो। कमजोर आर्थिक परिवारका लेखको शवलाई नेपाल पठाउनुपर्ने थियो।
सहयोग संकलनदेखि शव पठाउनेसम्मका सबै प्रक्रियाको नेतृत्व उनी आफैले लिए। काम गर्दै थिए, कार्यकाल सकियो।
उनलाई परिवारको पूर्ण साथ र सहयोग पनि उपलब्ध छ। ‘अध्यक्ष भएँ भने मैले सातै दिन, चौबीसै घण्टा संस्थालाई दिने छु,’ उनले भने। आगामी दुई वर्ष अध्यक्षका रुपमा संस्थालाई नेतृत्व दिने मात्रै नभई समस्याको सही समाधानमा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता पनि प्रेमले व्यक्त गरेका छन्।